Mohamed VI:MAHAY MANDRAY VAHINY NY MALAGASY -
AccueilRaharaham-pirenenaMohamed VI:MAHAY MANDRAY VAHINY NY MALAGASY
21/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny mpanjakan’i Maraoka, Mohamed VI no nisantatra ny fahatongavan’ireo filoham-pirenena hanatrika ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia hanomboka rahampitso. Ny sabotsy teo tamin’ny 7 ora sy 50 minitra alina no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny Boeing 747-400 Royal Air Maroc nitondra azy. Midika izany fa efa tafiditra anatin’ny fihaonamben’ny Frankofonia hivorian’ireo filohampirenena sy praiminisitra frankofonina isika…
Niaiky ny fahaizan’ny malagasy mandray vahiny ity olo- manan-kaja ity. Mendrika ho an’i Madagasikara ny fandraisana fivoriana iraisam-pirenena tahaka izao. Tsy takona hafenina teo am-pandraisana azy tokoa mantsy ny fahaiza-manaon’ny mpampiantrano nandray vahiny manan-jaka toa izao. Ny fotodrafitrasa ananantsika mifandraika amin’izany rahateo tsy mena mitahy ny an’ny firenen-kafa. Nipetrapetraka ny arofenitra, ny lafin’ny filaminana, ny hetsika ara-kolontsaina nandraisana azy izay nohafanain-dry Bakomanga tamin’ny vakodrazana malagasy. Hita ho velom-bolo sy faly ny mpanjaka Mohamed VI teo anatrehan’izany. Ny fihetsika aseho tokoa mantsy dia efa midika zavatra betsaka. Nihaona manokana izy sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina taorian’izay. Ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta dia voaresaka tamin’izany.
Nivantana tamin’ny fahitalavitra any Maroc ihany koa ny lanonana teny amin’ny Aéroport Ivato. Nanomboka tamin’iny sabotsy alina iny dia taty Madagasikara avokoa ny mason’izao tontolo izao.
Manan-danja lehibe amin-dry zareo Marokanina i Madagasikara satria mifamatotra ara-tantara aminy. Teto amintsika ( tany Antsirabe) no natao sesitany ny raiben’ity mpanjaka tonga eto amintsika ity ny taona 1954 (Mohamed V) . Noho izany indrindra no nanaovan’izy ireo tsangam-bato maharitra sy mitondra fampandrosoana ao Antsirabe. Anio no hitodi-doha any an-toerana izy ireo hanatrika ny fametrahana ny tsangambaton’ilay hopitaly lehibe ho an’ny reny sy ny zaza ao Antsirabe. Toeram-pitsaboana goavana sy ampy fitaovana lavitra noho ny hopitaly manara-penitra tamin’ny fotoan’androny izy io, satria aty amin’ny Ranomasimbe Indianina dia io hopitaly io no isan’ny hatanjaka indrindra. Hanatrika ny fanokafana ny fivoriamben’ny Presse Frankofone ao Antsirabe ihany koa izy sy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina.
Ny filoham-pirenena malagasy niaraka tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta sy filohan’Andrimpanjakana moa no tonga nitsena tamim-pomba ofisialy an’ity Roi du Maroc Mohamed VI ity. Hisesy hanomboka androany kosa ny fahatongavan’ireo filoham-pirenena hafa toa an’i François Hollande filoha frantsay, Alassane Ouattara filoha Ivoarianina, filohan’i repoblika sosialiste vietnamianina Tran Dai Quang, ny praiminisitra Canadien Justin Trudeau …sns
Teraka ny 21 aogositra 1963 tao Rabat Maroc ny mpanjaka Mohamed VI. Ny taona 1999 izy no nasandratra ho mpanjaka sy mpitarika an’i Maroc. Manan-janaka mianadahy ary nahavita fianarana ambony tao amin’ny Oniversite Nice- Sophia Antipolis tao Frantsa. Mahatratra 560 ireo delegasiona marokanina miara-dalana aminy amin’izao diany eto Madagasikara izao, izay ahitana minisitra miisa 5, mpandraharaha ambony toa ny filohan’ny Boi Afrika sy teknisianina…Nampiseho fiombonam-po tamin’ny fitsenana ny Mpanjakany teny Ivato koa ireo teratany marokanina monina eto Madagasikara.
Maro ny zavatra vitan’ny fitondram-panjakana tamin’ny taon-dasa ary hita taratra tamin’ny fiainam-bahoaka izany satria taonan’ny asa ny taona 2016. Ary nanamafy izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, nandritra ny lahateny nataony omaly teny Iavoloha tamin’ny fifampiarahabana ...Tohiny